Muwaadinnimada Maalgashiga ªº Muwaadinnimada Hanti Ma-Guurtada ªº
Sarkaalka Dowlada ee Jinsiyada Labaad ee Maalgashiga
Jinsiyadda iyo baasaboorka Saint Kitts iyo Nevis + xuquuqda booqashada fiiso la’aanta ee 155 dal
Jinsiyadda iyo baasaboorka Antigua iyo Barbuda + fiiso la’aan fiiso ilaa 150 dal
Jinsiyadda iyo baasaboorka Saint Lucia + xuquuqda booqashada fiiso la’aanta ee 146 dal
Jinsiyadda iyo baasaboorka Grenada + xuquuqda booqashada fiiso la’aanta ah ee 140 dal
Muwaadinimada iyo baasaboorka Dominica + xaquuqda fiiso la’aan fiisada 120 wadan
Kaabayaal aad u fiican iyo dabeecadda ugu fiican. Garoon diyaaradeed oo beddel ah
Barnaamijka ugu da'da weyn uguna xasiloon, Tirada ugu badan ee dalal fiiso la'aan ah,
Barnaamijka ugu faa'iidada badan ee Kareebiyaanka. Jannada loogu talagalay Yachtsmen.
Jinsiyadda Dominica ee Share Bay
Muwaadinimadaada Dominica ee ka timid Sirta Bay
Iibiyaha: AAAA LA TALIYE
Muuqaal ahaan waxay kuxirantahay meel sare oo meel sare ah halkaas oo kaymaha roobku kula kulmaan badda Dominica, Jasiiradda Kariibiyaanka "Jasiiradda Dabeecada", Secret Bay waa mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee adduunka iyo hudheel la aasaasay. Goobaha loo dalxiis tago ee lixda xidigood ee villa ah waxay ka kooban yihiin guryo qaab-dhismeed leh oo si qurux badan loo qalabeeyay, mid walbana leh barkad gaar loo leeyahay iyo milkiile guri oo shaqsi ah, wicitaan wicitaan, kuugga iyo hageyaasha, marin xeebeed qarsoodi ah iyo isbadal lagu sameeyay marti kasta.
Loogu talagalay naqshadeeyaha caanka ah Fruto Vivas, Abaalmarinta abaalmarinta ah ee loo yaqaan 'Secret Bay Villas' ayaa caan ku ah adduunka isku dhafka farshaxan ee naqshad sarreysa iyo farshaxanka maxalliga ah. Waxay sameystaan ​​guryaha raaxada leh ee hawo-furan ee hareeraha dabiiciga dabiiciga ah. Green Globe waa la shahaadeeyay oo gebi ahaanba laga sameeyay alaab waarta, Secret Bay Resort waxay ku dhacaysaa isku dheelitirnaan buuxda ee mas'uuliyadda deegaanka iyo raaxada martida.
Waxyaabaha raaxada leh ee ku yaal Secret Bay Resort waxay dhammaystiraan fasaxa jasiiradda ee ugu caansan. Ku billow maalintaada dib-u-cusbooneysiinta yoga ee webiga agtiisa Bwa Mang Wellness Pavilion, ka hel xoogaa nabad ah Treetop Gommier Spa, ku raaxee casho hawo furan oo casri ah oo laga helo Makhaayadda Zing Zing iyada oo aan la cunin wax menu ah, oo fiidkiina lagu dhammaystiro is biirsaday qarka dhagaxa Vetiver Sunset Deck oo indha indheynaysa Xeebta Secret. Runtii tani waa janno la helay.
Gudaha iyo dibaddaba dalxiiska, aragtiyo kala duwan iyo waaya-aragnimo nolosha beddelaysa ayaa ku sugaya. Haddii aad dooratid inaad "la gashid" khabiiradayaasheena khabiirrada ah, sahaminta noolaanshaha, neefsashada kaymaha ama aad u dhaadhacdo qoto dheer ee jasiiradda on biimayn canyoning biibiile, martida waxaa loo damaanad qaaday inay ka baxaan Dominica weligood la beddelay.
Mid ka mid ah noocyada noocyada ah ee guryaha loo yaqaan 'Caribbean real estate', uruurinta kooban ee dhismayaasha qaab dhismeedka qaab dhismeedka dhismayaasha ah oo dul saaran dusha sare ee dusha sare ee indhaha ka fiirinaya Badda Caribbean-ka.
Hoteelka ugu badan ee dabiiciga ah ee kuyaala DOMINIKA + PASSPORT-kaaga DOMINIKA
Secret Bay, oo caan ku ah hudheelka Relais & Châteaux iyo hudheelka # 1 ee Kariibiyaanka ee Safarka + Xilliga Nasashada, ayaa muddo dheer caan ku ahaa isku-dhafkeeda farshaxanka ah ee naqshad sarreysa, farsamo-yaqaannada maxalliga ah iyo khibradaha martida ee dhabta ah ee loogu talagalay dookhaaga shaqsiyeed. Dalxiiskan lixda xiddigood wuxuu imminka u keenayaa martigelin aan la qiyaasi karin oo adduunka oo dhan loogu mahadnaqayaa The Residences at Secret Bay, oo ah xaddidan hantida Caribbean-ka ee bixisa 42 villas qaab dhismeed qurux badan leh iyo guryo waaweyn oo ku dhex yaal albaabka Secret Bay. Halkan waxaad ka heli doontaa fursad dhif ah oo aad ku iibsato guri fasax raaxo leh oo bey'adeed leh, oo ay weheliso adeeg dalxiis oo aan la barbardhigi karin iyo adeegyo heer caalami ah - dhammaantood waxay ku yaalliin Dominica, mid ka mid ah kuwa ugu dadka yar, jawiga bey'adeed iyo dhaqan ahaan hodanka ku ah Kariibiyaanka.
Halkan waxaad ka heli doontaa fursad dhif ah oo aad ku iibsato guri fasaxa raaxada leh ee bey'ada ku habboon, oo ay weheliso adeeg lixda xiddigood oo aan la barbardhigi karin iyo adeegyo heer caalami ah - dhammaantoodna waxay ku yaalliin mid ka mid ah meelaha ugu dadka yar, jawiga bey'adeed iyo dhaqan ahaan hodanka ku ah Kariibiyaanka.
Guryo raaxo leh oo gooni ah oo ku yaal goob gaar loo leeyahay oo leh beero, barkad qotodheer, alwaax kuleyl ah iyo dhameystir casri ah.
Ku soo dhawow marin u helka adeegyada heer-caalami ah iyo adeegga lixda xiddig leh.
Lahaansho la'aan daryeel hantiyeed iyo barnaamij kireysi aad ufiican.
QIIMAYNTA IYO NOLOSHA LOOGU TALAGALAY DOMINICA Jinsiyadda
3 xeebo gooni ah oo aad ku dabaalan karto
Makhaayada Cirka ee Zing Zing
Qaabka Guryaha 'Gommier Spa Treehouse'
Fayo-qabka Fayo-dhowrka Webi Webi Bwa Mang
Zamann aqal isboorti oo badda agteeda ah
Barkad aan xad lahayn oo leh bad, baarka xeebta, makhaayad iyo cabanas *
Vetiver Qorrax Deck Cliff Edge
Xarunta jimicsiga casriga ah iyo naadiga carruurta *
Farshaxan Faneed Farshaxan & Khamri Yar
Godka badda ee goobta, raadadka dabeecadda iyo
Mucjisooyinka dabiiciga ah ee "Jasiiradda Dabiiciga ah"
* In la soo bandhigo sanadka 2021.
Milkiile villa u heellan
Hagayaasha dalxiiska ee ka baxsan guriga
Maamulka iyo dayactirka hantidaada
Helitaanka xawaaraha sare Wi-Fi internet
Qalabka xiisaha leh oo ay ku jiraan kayak, sabuurada taagan, gogosha yoga iyo qalabka urinta.
Ku kaydi villa kahor imaatinka
Dominica RUS dhalasho
Dhalashada Dominica ENG
Barnaamijyada Labaad ee Jinsiyadda
2021 Dhalashada Antigua iyo Barbuda
2021 Dhalashada Dominica
Jinsiyaddaada Labaad 60 maalmood gudahood
Suurtagalnimada in la beddelo Magaca iyo Magaca qoyska ee Deganaanshaha Canshuurta
Shirkadeena waxay leedahay ruqsadaha rasmiga ah ee dalalka waxayna ku yaalliin websaydhada dowladda
Caasimadeena la oggol yahay waa in ka badan 40 milyan oo rubi - tan waxaa loogu talagalay nabadda maskaxdaada
Ma ahan hal diidmo waqtiga shirkadda oo dhan. Waan ognahay sida loola shaqeeyo kiisaska ugu adag
Muwaadinimadaada Guri Guri
Dakhliga 3% + Suurtagalnimada fasax raaxo leh
Muwaadinimada Antigua iyo Barbuda waxaa degan Antigua Harbor Island Residences
Antigua iyo Barbuda Muwaadinimada Antigua Hermitage Bay Share
Antigua iyo Barbuda Muwaadinimada Wadaagida Bouganvillea Condominium
Antigua iyo Barbuda Muwaadinimada loogu talagalay Moon Gate Antigua Share
Antigua iyo Barbuda Muwaadinimada loogu talagalay Share Nonsuch Bay
Muwaadinnimada Montenegro (Montenegro) loogu talagalay helitaanka saami ama hanti dhan. Kaliya 2000 Baasaboor.
Muwaadinnimada Montenegrin ee guri ku yaal Porto Montenegro
Muwaadinnimada Montenegrin ee qolka hudheelka MONTIS MOUNTAIN RESORT
Muwaadinnimada Montenegrin ee saamiga Bjelasica 1450
Muwaadinnimada Montenegrin ee qaybta Westin Ski Resort Kolašin
Muwaadinnimada Montenegrin ee saamiga Montenegro Breza Hotel Iyo Spa
Waxa adiga kuugu xiisaha badan:
Waxaa jira fursado badan oo lagu helo ruqsadda deggenaanshaha Yurub. Qaarkood way adag yihiin, kuwa kalena way ka fudud yihiin. Waxay kuxirantahay dhamaan sharciyada socdaalka ee ...
Maajo 9, 2021
Sidee loo go'aamiyaa meesha ugu wanaagsan ee lagu noolaado meeraha Dunida? - waayo-aragnimadayda gaarka ah, aniga oo kaashanaya jawaab celin ka timid cosmopolitans kale iyo ururo takhasus leh ...
Immisa Jinsiyad ayaad heli kartaa
Immisa dhalasho ayaa loo oggol yahay Ruushka waxaa nidaaminaya qodobka 62aad ee Dastuurka Federaalka Ruushka. Sharciga Aasaasiga ahi ma mamnuucayo dhalashooyinka badan. Sharciga ...
Bixinta lacag bixinta:
Bixinta $ 25000 - Muwaadinimada Barnaamijka Maalgelinta
Damiin lacageed $ 12500 - Muwaadinimada Barnaamijka Maalgelinta
Damiin lacageed $ 10000 - Muwaadinimada Barnaamijka Maalgelinta
Baasaboor Dahab ah
Dhalasho Dahab ah
Hantida ma guurtada ah ee lagu helo Jinsiyadda:
Guryaha Saint Lucia
Saint Kitts iyo Nevis Real Estate
Antigua iyo Barbuda Real Estate
Hanti ma guurtada Montenegro
Hanti Ma-Guurtada Dominica
Hanti Ma-Guurtada Kariibiyaanka
Muwaadiniinta Ruushka, Belarus, Ukraine, Kazakhstan: VNZ.SU
↑ Dhalashada Vanuatu ↑ Jinsiyada Grenada ↑ Jinsiyada Dominica ↑ Jinsiyadaha Saint Lucia ↑ Jinsiyadaha Saint Kitts iyo Nevis ↑ Jinsiyada Antigua iyo Barbuda ↑ Dhalashada Bulgaariya ↑ Dhalashada Turkiga ↑ Qasrigii hore ee iibka